घरभित्रको हावा बाहिरभन्दा विषाक्त हुनसक्छ, यसरी गरौँ सुधार ! – Saurahaonline.com
घरभित्रको हावा बाहिरभन्दा विषाक्त हुनसक्छ, यसरी गरौँ सुधार !
काठमाडौं । हावामा घुलेर रहेको प्रदुषणको मात्रा हाम्रो स्वास्थ्यको लागि अत्यधिक हानिकारक हुनसक्छ । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि हामीले आफ्नै घरबाट सुरुवात गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि यी कामहरु गर्न सकिन्छ ।
घरमा चिसोको समयमा ताप्नकै लागि मात्रै भएपनि आगो बाल्ने गरिन्छ । अझ ग्रामिण भेगमा त खाना बनाउनका लागि भान्छामा प्रायः आगोकै प्रयोग हुन्छ । तर, यसबाट निस्कने धुँवा र वायु प्रदूषण स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुनसक्छ ।
धुम्रपान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो स्वास्थ्य त जोखिममा राख्छ नै, अन्य व्यक्तिलाई समेत विभिन्न रोगको शिकार बनाउन सक्छ । धुम्रपानका क्रममा निस्कने धुँवाले गर्ने व्यक्ति र उसको नजिक रहेका सबैलाई असर गरिरहेको हुन्छ ।
प्रदुषणबाट बँच्नका लागि घरमा जति थोरै कार्पेट प्रयोग भयो त्यतिनै राम्रो हुने गर्दछ । कार्पेटमा धुलोका कणहरुसहितका अन्य फोहोरको अंश तथा जीवाणुहरु रहेका हुन्छन् । यसैले घरमा कार्पेछको सट्टामा कडा आवरणवाला सामाग्री हाल्नुपर्दछ ।
घरमा जनावरहरु पालिएको छ भने, ती जनावरको सरसफाईमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । हावामा तीनीहरुको माध्यमबाट प्रदुषण फैलन नदिनका लागि दैनिक सफा गर्नुपर्दछ । यस्तै आफ्नो सुत्ने कोठा र भान्छा कोठाबाट जनावरलाई बाहिर राख्नुपर्छ ।
भान्छामा खाना पकाउने समयमा धुँवा र बाथरुमबाट निस्कने गन्धलाई बाहिर पठाउनका लागि एग्जस्ट फ्यानको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
जुत्ता तथा चप्पलको माध्यमबाट घरमा सबैभन्दा धेरै फोहोर आउँछ । त्यसकारण घरमा डोर म्याट राख्नुपर्दछ । र, यसको प्रयोग राम्रोसँग गर्नुपर्दछ ।
घरमा दुर्गन्धबाट बँच्नका लागि प्रायः मानिसले एअर फ्रेसनर, अगरबत्ती, धुपलगायत सुगन्धयुक्त चीजहरुको प्रयोग गर्दछन् । केमिकल प्रयोग गरिएका यी चीजहरु हानिकारक हुन्छन् ।
घरमा कुचोको सहायतामा बढार्दा धुलोका कणहरु हावामा फैलिन्छन् । जसका कारण स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्दछ । त्यसैले घरमा सरसफाईका लागि भ्याकुम क्लिनरको प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
घरमा झ्यालहरु पर्याप्त रहन जरुरी हुन्छ । घरमा ताजा हावा प्रवेश गराउनका लागि झ्याल तथा ढोकाहरु खुल्ला राख्नुपर्दछ । जसमार्फत घरभित्रको हावा ताजा बन्दछ ।